Progressive Voice Myanmar » Justice Held Hostage – Human rights violations by regime forces in Kachin State and Muse District, June-October 2021
Home Resources Reports Justice Held Hostage – Human rights violations by regime forces ...
December 15th, 2021 • Author: Kachin Women’s Association Thailand •3minute read
Date: 15th Dec, 2021
New KWAT report: climate of impunity fuels military rape in northern Burma
“Justice Held Hostage”,anew report by the Kachin Women’s Association Thailand (KWAT), documents ongoing shelling, shooting, arbitrary arrest and torture of civilians by the military regime’s troops in northern Burma during the past five months, and exposes howaclimate of impunity is fueling military rape.
Detailed analysis and maps by KWAT show how civilians are being deliberately targeted for collective punishment by regime troops in retaliation for resistance attacks. Burma Army shelling and gunfire have killed twelve civilians and injured thirty – half of them women — in Kachin State and Muse District of northern Shan State between June and October 2021.
KWAT has documented the arbitrary arrest of 77 people during the past five months. Some were severely tortured, including to death, and some used as human shields and minesweepers, including two farmers injured byalandmine while forced to walk in front of troops at night in Hpakant.
Analysis of two recent rape cases reveals clear confidence of impunity by the military perpetrators, who committed the crimes in broad daylight, near their camps. The state media’s reporting of the rape-murder ofa58-year-old woman by three ID 88 troops in Momauk in July – which made no mention of rape and insinuated the murder victim was to blame for “arguing” with the soldiers – shows ongoing shielding of military rapists at the highest levels.
Escalated conflict and targeting of civilians by regime forces have displaced over 14,000 villagers in Kachin State and Muse District since the coup, adding to over 100,000 existing IDPs. The regime has been impeding food aid delivery to new IDPs in Muse, who are blocked from seeking shelter across the Chinese border by high security fencing, newly reinforced by the Chinese authorities.
KWAT reiterates demands for concerted international pressure on Burma’s military regime to withdraw its troops nationwide and step down from power, so thatanew federal democratic constitution can be adopted to bring an end to the decades-long civil war.
We urge the international community to cut all forms of diplomatic, economic and military support to the regime, and impose economic sanctions on the Myanmar Oil and Gas Enterprise, which is providing huge revenues to the regime for arms purchases. We also call urgently for increased cross-border humanitarian aid to IDPs in northern Burma.
San Htoi (+95 9761113558)
ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ (KWAT) သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။
KWAT အစီရင်ခံစာသစ်- မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ စစ်တပ်မုဒိမ်းကျင့်မှုကို အားပေးအားမြောက်ပြုနေသည့် ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်နေသော အခြေအနေများကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) မှ အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်သော “ချုပ်နှောင်ခံရသည့်တရားမျှတမှု” အစီရင်ခံစာသည် လွန်ခဲ့သည့် ၅ လတာ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ စစ်အာဏာရှင်မှ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ဆက်လက်ကျူး လွန်နေသော လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများ၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုများ၊ မတရားဖမ်းဆီးမှုများနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်နေသည့် အခြေအနေ များသည် စစ်တပ်၏ မုဒိမ်းကျင့်မှုကိုမည်သို့ အားပေးအားမြောက်ပြုနေကြောင်း ဖော်ထုတ်တင် ပြထားသည်။
KWAT ၏အသေးစိတ် လေ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့် မြေပုံများသည် ခုံခံတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် လက်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်တပ်များ၏ စုပေါင်းပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကို အရပ်သားများအနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မည်သို့ ပစ်မှတ်ထားခံနေရသည်ကို ပြသနေသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနှင့် သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အရပ်သား ၁၂ ဦး သေဆုံးကာ ၃၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိုထိခိုက်သေဆုံးမှုများထဲတွင် အမျိုးသမီးဦးရေမှာ တဝက်ပါဝင်သည်။
KWAT သည် လွန်ခဲ့သည့် ၅ လအတွင်း လူပေါင်း ၇၇ ဦး မတရားဖမ်းဆီးခံရမှုကို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။ ဖားကန့်တွင် ညအချိန် စစ်သားများရှေ့အတင်းအဓမ္မ လမ်းလျှောက်ခိုင်းစေခဲ့ရာ မြေမြှုပ်မိုင်းနင်းမိခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် လယ်သမား နှစ်ဦးအပါအဝင် အချို့မှာ လူသားဒိုင်းနှင့် မိုင်းရှင်းလင်းသူများအဖြစ် အသုံးပြုခံရခြင်းနှင့် သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်ဆိုးဝါး သည့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို ခံခဲ့ကြရသည်။
မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မုဒိမ်းမှုနှစ်ခုကို လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ ကျူးလွန်သူမြန်မာ စစ်သားများသည်၎င်းတို့၏ စခန်းအနီး နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့မှုများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့သည် အပြစ်ပေးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်မည်ကို ယုံကြည်နေကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လအတွင်း တပ်မ ၈၈ မှ စစ်သား ၃ ဦးသည် အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတဦးအား မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်မှုအကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်း၌ ရေးသားဖော်ပြရာတွင် မုဒိမ်းမှုအကြောင်း တစုံတရာ မပါရှိသည့်အပြင် စစ်သားများနှင့် “ငြင်းခုန်စကားများ”ခြင်းကြောင့်သာ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရသည့်ပုံစံဖြင့် ကျူးလွန်ခံရသူကိုပင် ပြန်လည်အပြစ်တင်ရေးသာဖော်ပြချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျူးလွန်သူ မြန်မာစစ်သားများအား အကာအကွယ် အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိ ဆက်လက်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်မှာ စိုးရိမ်ဖွယ် ပြသနေသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းတွင် ပဋိပက္ခပြင်းထန်လာ ခြင်းနှင့် မြန်မာစစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက် ခြင်းများသည် ရွာသူရွာသား ၁၄,၀၀၀ ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ရှိရင်းစွဲ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်ဦး ရေနှင့် ပေါင်းလိုက်လျှင် စုစုပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ထိ တိုးမြင့်စေခဲ့သည်။ တရုတ်အာဏာပိုင်များ၏ လုံခြုံရေးမြင့်မားသော နယ်စပ်စည်းရိုးများ အသစ်ထပ်မံလုပ်ထား ခြင်းကြောင့် တရုတ်နယ်စပ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်၍မရသော မူဆယ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်အသစ်များထံသို့ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်မှ တားမြစ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားနေသော ပြည်တွင်းစစ်ကို ချုပ်ငြိမ်းစေမည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် အခြေခံဥပဒေသစ် တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် မြန်မာစစ်တပ်မှ တနိုင်ငံလုံးရှိ ၎င်း၏ တပ်များအားလုံးကို ဆုတ်ခွာရန်နှင့် အာဏာချုပ်ကိုင်ထားမှုမှ အဆုံးသတ်ရန် မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် ထိရောက်သော ဖိအားပေးမှုများလုပ်ဆောင်ရန် KWAT မှ ထပ်မံတောင်းဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်နှင့်ပတ်သက်သော သံတမန်ရေးရာများ၊ စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးထောက်ပံ့မှုအားလုံးကို ဖြတ်တောက်ရန်နှင့် စစ်တပ်၏ လက်နက် ဝယ်ယူမှုအတွက်ကြီးမားသော ဘဏ္ဍာငွေများ ပေးဆောင်နေသည့် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများကို တိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့မှ အရေးတကြီးတောင်းဆိုပါသည်။ပိုမိုသိရှိလိုပါက –
မွန်းနေလီ (+ ၆၆ ၈၅၅၂၃၃၇၉၁)
ဆန်ထွယ် (+၉၅ ၉၇၆၁၁၁၃၅၅၈)
Download Report Full PDF version in [English] [Burmese]